The music tufaax software ugu wanaagsan
Qeybta 1: download / record tufaax music free la TunesGo
Qeybta 2: Saxiixa music Apple u dhexeeya qalabka wax
Qeybta 3: dhamaystiran Lugood id3 music tags, si toos ah u daboolaa
Wondershare TunesGo waa mid ka mid ah oo kale ugu wanaagsan ee Lugood iyo waa boosteejo ah taas oo ka dhigaysa degsado iyo rikoodh Apple music on macruufka aad salaysan qalab aad u fudud. Adeeggani waa u fududahay ah si ay u isticmaalaan, adeega suuqa kala iibsiga ku haboon oo degdeg ah kaas oo awood kuu si ay u gutaan hawlaha badan oo ay ka mid yihiin wareejinta music iyo maaraynta warbaahinta. Haddii aad rabto in aad ogaato oo ku saabsan dajinta iyo qoraalana Apple music function ku TunesGo, waxaad tagi kartaa iyada oo macluumaadka soo socda la siiyey.
Iyadoo TunesGo, waxaad si fudud u sii qulquli karaan music Apple ku saabsan qalabka macruufka ka dibna sidoo kale ku wareejin music ka huleeshay in aad PC iyo qalabka kale ee.
Haddii aan isticmaalka Lugood, madal waxay kaa caawin kartaa in aad ku darto dhammaan noocyada kala duwan ee warbaahinta ay ka mid yihiin Podcasts iyo Lugood U qalabka aad.
Waxaad sidoo kale ku wareejin karaa Apple Music Playlists in aad iPhone, iPad, iPod iyo qalab kale oo loo marayo adeeggan.
Waxa kale oo cajiib ah oo ku saabsan Wondershare TunesGo waa xaqiiqda ah in aad si fudud ku wareejin karaa Apple Music dhex dhexeeya qalab kala duwan. Adeeggan fogaado baahida ah dhex mareen Lugood adag si ay u kala iibsiga, waana wax badan oo deg deg ah oo ku habboon iyo sidoo kale. Haddii aad rabto inaad ogaato sida kani waxaa samayn kara, kuu gudbin kara soo socda.
Iyada oo TunesGo, si fudud ka iDevices in aad Lugood iyo dib u leedahay inaad u guurto warbaahinta.
Waxa kale oo aad waafajinta karaan qalab kasta Apple si aad u computer iyo in kastoo tani shaqo, wax kasta oo aad sii qulquli on ka mid ah qalab Apple laga heli doonaa in aad kombuutarka iyo aaladaha kale ee Apple iyo sidoo.
Wondershare TunesGo sidoo kale awood u aad ku darto oo ku wareejin podcasts iyo warbaahinta kale ee Apple Music dhexeeya qalab kala duwan.
Tan iyo music Apple aqbalay oo keli ah qaabab file music yar qaarkood, waxaad samayn kartaa isticmaalka TunesGo si loogu badalo qaabka files si ay la aqbali karin by Apple.
Qeybta 3: Buuxi Lugood id3 music tags, si toos ah u daboolaa
TunesGo ma ahan oo kaliya boosteejo ah oo cajiib ah si ay u gudbiyaan faylasha iyo xogta aad laakiin sidoo kale aad u saamaxaaya in ay si fiican u maamuli. Waxay kaa caawinaysaa inaad isku dubarido files, iyaga waafajinta iyo u maareyn sidan oo kale in aanad wax dhib ah kala sooca files oo raadinaya iyaga u wajihi doonta a. Si aad wax badan oo ku saabsan isku og, kuu gudbin kara waxyaabaha soo socda:
Iyada oo TunesGo aad si fudud u abaabuli karaan files music aad iyo sidoo kale la abuuro playlists on qalabka macruufka aad.
Wondershare TunesGo sidoo kale kuu ogolaanaysaa inaad waafajinta nooc kasta oo qalabka Apple ay ku qoran Mac ama PC iyo sidaas aad u saamaxaaya in ay ka fogaadaan wareejinta walba gacanta soo gudbin naftaada.
Madal Tani waxay tirtirtaa koobi nuqul ka mid ah files music on gaar ah si boos loo baahnayn in qalabka la baabbi'in.
Haddii aad ayaa laga badiyay music kasta oo ku saabsan qalab aad sabab u ah nidaamka shil ama reformat, markaas madal wuxuu kaa caawinayaa in ay dib u helaan xogta aad tan waxay abuurtaa gurmad automatic on your computer.
Haddii ay jiraan heeso maktabadda Lugood aad taas oo ay tags dhammaystirnayn ama sax ahayn, waxay si sahal ah ayaa loo hagaajin karaa ilaa by TunesGo iyo tan ka caawisaa in maamul wanaagsan oo tags.
TunesGo ayaa sidoo kale awood u aad si uu u xaliyo music Lugood ku daboolaa maaraynta wanaagsan oo heesaha.
TunesGo sidoo kale aad u saamaxaaya in ay nadiifiso kuwan raadkaygay ku seegay.
> Resource > Music > The Best Apple Music Software